အန္တာတိကတိုက် (အင်္ဂလိပ်: Antarctica; ဗြိတိသျှအသံထွက် /ænˈtɑːktɪkə/ သို့မဟုတ် /ænˈtɑːtɪkə/, အမေရိကန်အသံထွက် /æntˈɑːrktɪkə/ ( )) သည် ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ဆုံး တိုက်ကြီး ဖြစ်ပြီး တောင်ဝင်ရိုးစွန်း တည်ရှိရာ နေရာ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ တောင်ဘက်ခြမ်း အန္တာတိတ် ဒေသအတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အန္တာတိတ် စက်ဝိုင်း၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး တောင်ဘက် သမုဒ္ဒရာက ဝန်းရံထားသည်။ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၅.၄ သန်း (စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁၄ သန်း) မျှ ကျယ်ဝန်းပြီး အာရှ၊ အာဖရိက၊ မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက တိုက်တို့ပြီးလျှင် ပဉ္စမမြောက် အကြီးဆုံးတိုက် ဖြစ်ပြီး ဧရိယာ၏ ၉၈% သည် ပျမ်းမျှ (၁.၆) ကီလိုမီတာ အထူရှိသည့် ရေခဲများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိသည်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက အန္တာတိကတိုက်သည် ဩစတေးလျတိုက်၏ နှစ်ဆမျှ ကျယ်ဝန်းသည်။ အန္တာတိကတိုက်၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် ရေခဲများ ဖုံးလွှမ်းနေပြီး ရေခဲထု၏ အထူမှာ ၁.၂ မိုင် (၁.၉ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိပြီး မြောက်ဘက်စွန်း အန္တာတိက ကျွန်းဆွယ်မှ အပ အခြားဒေသအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
United States Central Intelligence Agency (2011)။ Antarctica။ The World Factbook။ Government of the United States။ 22 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
British Antarctic Survey. "Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica". The Cryosphere journal. Retrieved on6January 2014.
National Satellite, Data, and Information Service။ National Geophysical Data Center။ Government of the United States။ Archived from the original on 13 June 2006။9June 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Joyce, C. Alan (18 January 2007)။ The World ataGlance: Surprising Facts။ The World Almanac။ Archived from the original on4March 2009။7February 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မူစတာ တက္ကသိုလ် မှ ပညာရှင်တဦး ဖြစ်သည့် အန်ဂျီလင်ကာ ဟမ်းဘတ်